Grass Valley သည် Software မှသတ်မှတ်ထားသောအနာဂတ်သို့စက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဦး ဆောင်မှုကိုခိုင်မာစေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မြက်ချိုင့်နေတဲ့ဆော့ဗ်-သတ်မှတ်ထားသောအနာဂတ်ဖို့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များကူးအပြောင်းကာလအဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှတဆင့်ခေါင်းဆောင်မှုခိုင်မာ
Montreal - 13: 00 CET စက်တင်ဘာလ 10, 2019 - IBC 2019 မှာ, မြက်ချိုင့် ပူးပေါင်းမှတဆင့်တီထွင်မှုမောင်းထုတ်ရန်ခွန်အားနှင့်တည်ငြိမ်ရေး၎င်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, စက်မှုလုပ်ငန်းမှဦးဆောင်မှုပေးရန်၎င်း၏နက်ရှိုင်းသောကတိကဝတ်ပြည့်ကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါမြက်ချိုင့်တဲ (# 9.A01) မှဧည့်သည်များက၎င်း၏ applications များ-based ဖြေရှင်းချက်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဆန္ဒပြပွဲများနှင့်အတူထုတ်ကုန်အသစ်ဖွင့်တိုးမြှင့်မှုများတဲ့အရေအတွက်ကမြင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မြက်ချိုင့်အတွက် GV နည်းပညာမဟာမိတ်အဖွဲ့ (GVTA) မှတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်နှစ်ဦးစလုံးမှအကျိုးကျေးဇူးများကိုကယ်နှုတ်တော်မူကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းမိတ်ဖက်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ စီစဉ်ထားတဲ့ဖောက်သည်ကြေညာချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်တစ်ဖောင်နှင့်အတူမြက်ချိုင့်ကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအိုင်ပီ workflow နှင့်ဝေးလံခေါင်သီ / မှာ-အိမ်မှာထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ဒေသများတစ်လျှောက်တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်း Front-ပြေးသမားအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုခိုင်မြဲပါလိမ့်မယ်။
"မြက်ချိုင့်ကိုသူတို့မဆိုစက်ပေါ်ရှိဖြစ်မည်အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်ဖောက်သည်သြဇာအိုင်ပီနဲ့ 4K UHD ဖြေရှင်းချက်ကူညီပေးနေအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သာ. မြတ်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုယခုအရင်ကထက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများအတွက်ပိုပြီးအရေးပါသည်နှင့်ကျွန်တော်စီးပွားဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်မှီခိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အလွယ်တကူနှင့်အလျင်အမြန်ချထားဖြစ်ကြောင်းအဆင့်မြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကိုပလက်ဖောင်းပို့ခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြ, "တိပခုံး, မြက်ချိုင့်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ "ဤကဲ့သို့သော Advanced ကျွန်တော်ညာဘက်ဖြေရှင်းချက်ညာဘက်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်ကိုသေချာစေရန်နီးကပ်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့ရှိသည်နက်ရှိုင်းသောဆက်ဆံရေးအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြတယ်။ "
အဆိုပါမြက်ချိုင့်ရပ်တည်ချက်တခုတခုအပေါ်မှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ OB သရုပ်ပြအတွက်တစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောကြားဆက်ဆံရေးရလဒ်များသည်။ GV နှင့် NEP ဗြိတိန် NEP ရဲ့ Ceres ထရပ်ကား, အဓိကအိုင်ပီအပြောင်းအလဲနဲ့မြက်ချိုင့်ဖြေရှင်းနည်းများအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ထားတဲ့အတွက်အခြေခံစံနှုန်း All-IP ကို ​​OB ထရပ်ကားသရုပ်ပြတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းနေကြသည်။ တက်ရောက် Ceres ဒီနေ့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာအရေးပါဖြစ်ကြောင်းအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏မြင့်အဆင့်ဆင့်ကယ်နှုတ်မြက်ချိုင့်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်အိုင်ပီစနစ်များ leverages ဘယ်လိုသင်ယူရဦးမည်ကိုပြပါ။
ယင်း၏ IBC ပွဲဦးထွက်ပြုလုပ်ခြင်းသည် GV နည်းပညာမဟာမိတ်အဖွဲ့ (GVTA) မြက်ချိုင့်နှင့်အတူနည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများပံ့ပိုးပေးမိတ်ဖက်အဆိုပါမြက်ချိုင့်အစုစုကိုတိုးချဲ့ကြောင်းဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးရန်အတွက်အသစ်တခုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါမြက်ချိုင့်တဲတစ်ခုဧရိယာမြက်ချိုင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစနစ်များနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ကျယ်ပြန့ဖေါ်ပြခြင်းအတော်ကြာ GVTA မိတ်ဖက်ထံအပ်နှံလိမ့်မည်။ အဆိုပါ GVTA ဟန်ပြ program ကိုတိုးတက်လာသောဝယ်ယူမှုယုံကြည်မှုနှင့်ရွေးချယ်ရေးကယ်တင်တတ်၏ပုံကိုလည်းထင်ရှားစေတော်မူမည် တစ်ရိုးရှင်းသောဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်အား; နှင့် Customer များအတွက်ဖြန့်ကျက်အန္တရာယ်လျှော့ချ။
"ကျနော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအခုအချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပေးကာစံပြအခြေအနေမှာရောက်နေယုံကြည်ပါတယ်" ပခုံးဆက်ပြောသည်။ "ရှေ့ဆက်အနာဂတ်မှာရောက်စေဖို့ကျနော်တို့အစွမ်းသတ္တိ၏တစ်ဦးအနေအထားအတွက်အော်ဂဲနစ်တိုးတက်မှုနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းထံမှပေါ်ထွက်လာပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်ဘို့တီထွင်ဆန်းသစ်အပေါ်ဖြစ်တယ်, အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ။ "
ဤအကြေညာချက်များအပြည့်အဝအသေးစိတ်ဟိုတယ် Novotel မှာ 12 မှာကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 15.30 အပေါ်မြက်ချိုင့်ဖွင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ, အမ်စတာဒမ် RAI မှာထင်ရှားလိမ့်မည်။ မြက်ချိုင့်ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် IBC Show ကိုစာနယ်ဇင်းကြေညာချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့အောက်ပါလင့်ခ်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ:
RT ကို Software ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါမောင်းရန်မြက်ချိုင့်နည်းပညာမဟာမိတ်အဖွဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
GLOBO မြက်ချိုင့်ရဲ့ IP Routing နှင့် signal processing Technologies ကအပေါ်အခြေခံပြီးနယူးအားလုံး-IP ကိုပြပွဲစင်တာမှလွှတ်တင်
သေးစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အစွမ်းထက် All-In-One ကိုထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုကယ်ယူမှ IBC 2019 မှာမြက်ချိုင့်မိတ်ဆက်လူမျိုးများအားကုလ AV စနစ်
မြက်ချိုင့်စျေး GV ခြေလှမ်း Unscripted တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Tablet ကို-အခြေခံပြီး Automation-Assisted ထိန်းချုပ်ရေးကယ်ယူမှ
CES2017 ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး MStar SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-09-10
ယခင်: MediaKind တီဗီ Service Providers, အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များ, လူငယ်ကဏ္ဍနှင့်လုပ်ငန်းရှင်များအဘို့နောက်ထပ်တန်ဖိုးကိုမကယ်မလွှတ်မှကြံ့ခိုင် cloud-based ဖြေရှင်းချက်လွှတ်တင်
နောက်တစ်ခု: Nevion ဦး ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းစုသည် 2G ထုတ်လွှင့်သည့်ဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းအတွက်ယူရို ၂ သန်းရန်ပုံငွေရရှိသည်